यो लेख भाद्र ६, २०७६ (August 23, 2019) को कान्तिपुर साप्ताहिकको समय सन्दर्भ स्तम्भमा प्रकाशित् छ ।
ईतिहास अतीत होइन, यसको सानो अंशमात्र हो । तथ्यहरुले जहिले सत्य बोल्दैनन्, तथ्यलाई कसरी लिने मानिस् अनुसार फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैपनि एब्सल्युट सत्यको अस्तित्व छैन । ठाउँ, व्यक्ति र परिस्थिति अनुसार एउटाको सत्य अरु धेरैको लागि मिथ्या हुन्छ । एउटा तथ्य र अर्को तथ्यलाई पात्र, ठाउँ वा समय दिएर मुर्त कथा जो बन्छ त्यो ईतिहास हो । ईतिहास एउटा लिखत भएकोले यसले अलिखित अतीतका ९० प्रतिशत भन्दा बढी कथा वा घटनाहरु गायब बनाएको हुन्छ । कसैले कुनै प्रश्नको उत्तर मौनताबाट दिन्छ भने बुझ्नेले एउटै तरिकाबाट बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन । जो अब्यक्त, अलिखित, वा अदृष्य छ त्यो फिक्सन हो ।
त्यसैगरि जीवन एउटा वास्तविकता हो भने मृत्यु पछिको जीवन एउटा फिक्सन हो । अर्थात मृत्यु हरेक जिन्दगीको फिक्सन छिर्ने द्वार हो । जसरी अब्यक्त भुतकालहरुलाई कलम र पानाहरुले कथा प्रश्फुटनार्थ मुख दिईन्छ त्यसैगरि मृत्युपछिको फिक्सनमा बाँचिरहेका जिन्दगीहरु अनेक रुपमा वास्तविकतालाई छुन आईरहन्छन् । उनीहरुका बोल्ने मुखहरु भनेकै हाम्रा सपना, कल्पना अनि फिक्सनहरु हुन् । शायद तीनै आत्माहरुका अंशहरु नै मध्यरातको निन्द्रा बिच कसैलाई झस्काउने कारक हुन् । अनि शायद तीनै अदृष्य गैरबैज्ञानिक इन्जिनहरु भगवान र भुतको भ्रम भिरेर यता कता बेलाबेलामा मर्त्यलोकमा तैरिरहन्छन् । शायद शायद ।
मलाई म र तँलाई तँ अनि उस्लाई ऊ भनेर चिनाउने चालक को हो ?
ईतिहासमा लेखिएका गौतम बुद्ध, पृथ्वी नारायण शाह, कालु पाण्डे र जङ्गबहादुरहरु मात्र सत्य होइनन् । अतीतका केही कालखन्डमा जन्मेर अवसान भएका करोडाँैकरोड मानिसहरुका यहाँ मृत्युपर्यन्त अवशेष नै पखाल्लिएर गएका छन् । तिनीहरुलाई तिनीहरुकै पनाती खलकहरुले श्राद्दमा पिन्ड सेलाएर फगत एक दिन स्मरण गर्लान्, त्यो पनि केही समयसम्म । तीन्का नाम, अनुहार र हाउभाउ समयले बिर्साऊँछ, मानिसले बिर्सिन्छ । यो शरीर चलाऊने अभौतिक चीज के हो? मलाई म र तँलाई तँ अनि उस्लाई ऊ भनेर चिनाउने चालक को हो ? सबै जीवहरुलाई चलाऊने अवश्य पनि हामी भित्र एउटा ड्राइभर छ, जुन ब्यक्ति र जीव पिच्छे पृथक छ । मृत्युपछि ती अरबाँै अरबको सङ्ख्यामा रहेका ड्राइभरहरु कता बिलाँऊछन्? के हामीभन्दा फरक ती ड्राइभरहरुले जन्मअघिको जिन्दगी र मृत्युपछिको जिन्दगी पनि जिउँछन्? यस्ता प्रश्नहरु जति सोच्यो त्यति नयाँ प्रश्नहरु जन्मिरहन्छन् ।
पटक पटक लेखक, कलाकारहरुले ईतिहासका अमुर्त पात्रहरुलाई आकार दिएर उभ्याउने चेष्टा गरिरहेका हुन्छन् । अतीतलाई ईतिहासमा परिणत गर्ने यो अभियान सदैब अपुरो रहने कुरो निश्चित छ । नासिएर गएका करोडौँ करोड जिवात्माहरुका खरबौ खरब कथाहरु लेखिन बजेट पुग्दैन, समय छैन, द्रष्टाहरुको अभाव छ । सोचमा समेत नअटाउने ती कथाहरु अभिब्यक्त गरेर कस्ले, कहिले सक्छ?
यो ब्रह्मान्डको यावत इहलीलाहरुको प्रारुप प्रकृति हो । तसर्थ प्रकृति नै भगवान हो । सबै नश्वर् जगतलाई प्रश्रय दिने पृथ्वी, सुर्य, वायु, आकाश, जल सबै सबै प्रकृति हुन् । जन्मिने हरेक चीज मर्नै पर्ने यहि प्रकृतिको अकाट्य नियम सबैले पालन गर्नु पर्दछ । प्रकृतिले आफ्नु आयु रहेसम्म सबै लीला रचाएकै हुन्छ । मनुस्यजगतमा कुनै मानिस् नामी हुन्छ, बिख्यात हुन्छ तर आखिर प्रकृति जगतमा त्यही मानिस् ठीक अरु ऐरे गैरे सरह नै बिलय हुन्छ । प्रकृतिले मानव निर्मित शालीक वा ताम्रपत्र बुझ्दैन । ढुङ्गो धरी एक दिन तत्वमा रुपान्तरण भएर अर्कै परिचयमा बिलिन हुन्छ । तसर्थ प्रकृतिले सबै अतित देखेको छ तर मानिसले केवल ईतिहास देख्दछ । यदि हामी ईतिहास कोर्ने ईतिहासकार वा ईतिहास रच्ने महानायक् बन्यौँ भने पनि त्यो मनुष्यजगतको लागिमात्र हुनेछ ।